बर्लिनको पर्खाल ढलेपछि- विचार - कान्तिपुर समाचार
कार्तिक ३०, २०७६ रमेश के.सी.
शीतयुद्धको जीवित इतिहास बर्लिनको पर्खाल ढलेको गत कात्तिक २३ गते अर्थात नोभेम्बर ९ मा ठिक तीस वर्ष पुग्यो । पुँजीवादी स्वतन्त्र विश्व र साम्यवादी विश्वबीच विभाजन र द्वन्द्वको विम्ब बनेको उक्त पर्खाल युरोपमा पूर्वी जर्मनी र पश्चिमी जर्मनीलाई विभाजन गर्न तत्कालीन साम्यवादी केन्द्र सोभियत संघले बनाएको थियो । पूर्वी जर्मनीमा स्टालिनवादी एकदलीय शासन प्रणाली थियो भने पश्चिमी जर्मनीमा उदार प्रजातन्त्रवादी शासन थियो । ४५ किलोमिटर लामो यो पर्खाल सन् १९६१ मा बनाइएको थियो ।
जसलाई पार गरेर भाग्न खोज्दा हजारौं मानिस गिरफ्तार भए भने कतिले मृत्युवरण गरे । साम्यवादी पूर्वीय जर्मनीमा स्वतन्त्रता थिएन, दमन थियो । त्यस दुश्चक्रबाट भाग्न खोज्नेहरूका लागि रोक्न बनाइएको यो पर्खाल शीतयुद्धको विम्बका रूपमा सन् १९८९ सम्म रहिरहयो ।
‘गोर्वाचोभ महोदय यो पर्खाल ढाल्नुस्’ भनेर अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन गर्जिएको केही समयपछि उक्त पर्खाल विना कुनै रक्तपात ढल्यो । लाखौं मानिसहरूबीच विभेदको रूपमा रहेको यो पर्खाल ढलेपछि स्वतन्त्र विश्व खुसी भयो । पूर्वी युरोपबाट विस्तारै साम्यवादी शासन प्रणालीहरू समाप्त भए । बाल्टिक राज्यहरू स्वतन्त्र भए । सन् १९९१ सम्म आइपुग्दा सोभियत साम्यवाद पतनमात्र भएन, उक्त राष्ट्र नै विघटन भयो । बीसौं शताब्दीकै मूलस्वर स्वतन्त्रता हो भन्ने इतिहास रचियो । हुन त सन् १९८५ मा सत्तामा आएपछि सोभियत नेता मिखाइल गोर्वाचोभले पुनर्निर्माण र खुलापनको कार्यक्रम ल्याएका थिए । सोभियत साम्राज्य आर्थिक संकटमा फँसेको थियो । उसको भूराजनीति विश्वबाट पछि हट्दै गएको केही समय भएको थियो । अमरिकीहरूले नेतृत्व गरेको स्वतन्त्र विश्वको विजय भयो, जुन शीतयुद्धको अन्त्य भनेर मानवजातिको इतिहासमा अंकित छ ।
करिब ४५ वर्ष लामो वैचारिक ध्रुवहरूको यो द्वन्द्व युरोपमा बढी केन्द्रित थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि चर्किएको यो द्वन्द्वका क्रममा हंगेरी र चेकोस्लाभाकियाले सोभियत साम्यवादको हस्तक्षेपमा कम्युनिस्ट शासन अन्तर्गत रहनुपर्‍यो । पोल्यान्ड, रुमानिया, अल्वानिया आदि राष्ट्रहरू साम्यवादी भए । युगोस्लाभाकिया आफ्नै प्रकारले साम्यवादी बन्यो । पूर्वी युरोप साम्यवादी र पश्चिम युरोप पुँजीवादी बने । पूर्वी जर्मनीका जनता पश्चिमीजस्तै स्वतन्त्र र सम्पन्न बन्न चाहन्थे । तर त्यसलाई बर्लिनको पर्खालले रोक्यो । बर्लिनको पर्खाल ढलेपछि पूर्वी जर्मनीका अन्तिम शासक एरिक होनेकरले क्युबामा शरण लिए । वर्तमान रूसका राष्ट्रपति बर्लिन पर्खाल ढलेको बेला पूर्वी जर्मनीको ड्रेसडेन सहरमा केजीवी गुप्तचर संस्थाको अधिकारी थिए । शीतयुद्ध अन्त्यलाई बीसौं शताब्दीको ‘ठूलो भूराजनीतिक विध्वंस’ भन्ने पुटिन अहिले शीतयुद्धकालीन आफ्नो राष्ट्रको वैभव फर्काउन लागिपरेका छन् । शीतयुद्धको अन्त्यलाई प्रसिद्ध हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक स्यामुअल हन्टिङटनले प्रजातन्त्रको तेस्रो लहर भने । उनले ‘थर्ड वेब’ शीर्षकमा पुस्तक नै लेखे ।
अर्का राजनीतिशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामाले यस घटनालाई ‘इतिहासको अन्त्य’ भनेर नामकरण गरे । प्रजातन्त्र र बजार अर्थप्रणालीलाई नै विश्वको अन्तिम शासन पद्धति भनी ठोकुवा गरे । तर त्यो सत्य सावित भएन । संसार अहिले एकाधिकारवादतर्फ फर्किरहेको छ । उदार प्रजातन्त्र संकटमा छ । मानवजाति प्रविधि सभ्यतामा प्रवेश गरिरहेको छ । इतिहासको अन्त्य भविष्यवाणीबाट फ्रान्सिस फुकुयामाले नाम र बदनाम दुवै कमाए । उक्त घटनापछि पूर्वी युरोप लगायत विश्वका कैयौं राष्ट्रहरूले खुला बजार र प्रजातान्त्रिक पद्धति अपनाए । जसलाई अर्थशास्त्रीहरूले नवउदारवाद भन्छन् । यसले आम जनताको जीवनस्तर उकास्न सकेन ।
केही सीमित मालिकहरूमा अपार सम्पत्ति थुप्रियो । प्रजातन्त्र चलाउनेहरू नै यसलाई बिगार्न उद्यत बने । पूर्वी युरोपभरि लोकप्रियतावाद हावी छ । युरोपियन युनियन मरिरहेको छ भने बेलायत युरोपबाट निस्कने सकसमा छ । अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्पको जातिवादी, अनुदारवादी र लोकप्रियतावादी शासनको सिकार भएको छ । पश्चिमी विश्व व्यवस्थाको ‘प्रोजेक्ट’ धराशायी भएको छ । शीतयुद्धको अन्त्यपछि जुन आशा देखिएको थियो, त्यो अहिले निराशा, विभाजन र शासनको संकटको रूपमा देखापरेको छ । यो ३० वर्षमा एउटा पुस्ता हुर्किएको छ, जसलाई बर्लिनको पर्खाल ढलेको सम्झना छैन । सूचना र प्रविधि क्रान्तिले सकारात्मक कुराहरू ल्याएपछि यसले मानिसलाई एक्लो विभाजनकारी बनाएको छ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले प्रजातन्त्रलाई संकटमा पारेको छ । यस्तो बेला बर्लिनको पर्खाल ढलेको तीस वर्षलाई कसरी लिने ? जर्मनीकी चान्सलर एन्जेला मार्केलले यस उपलक्ष्यमा बोल्दै पर्खालको पतनले जर्मनीको एकीकरण सम्भव भएको बताइन् । उनले प्रजातन्त्र मानव अधिकार र कानुनको शासनमा जोड दिँदै स्वतन्त्रताको मूल्य खेलाँची नभएको बताइन् ।
जर्मनीको पर्खाल ढलेको घटनाले नेपालमा पनि एउटा सपनाको जन्म गराएको थियो । यही क्रममा ३० वर्ष लामो एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भई प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । तर विरोधाभास यो छ कि विश्वका साम्यवादी पतन हुँदै गर्दा नेपालका साम्यवादी पञ्चायत ढाल्न सहायक बने । अहिले १० वर्ष ‘जनयुद्ध’ गरेको माओवादी घटक पनि प्रजातान्त्रीकरणसँगै सत्तामा छ । यहाँका साम्यवादी दलहरू विचारको राजनीति नगरेर प्रजातान्त्रिक संविधान अन्तर्गत छन् । पञ्चायत ढलेको ३० वर्षपछि पनि नेपाली जनताको जीवनस्तर भने उठ्नसकेको छैन । प्रजातन्त्र स्थापनापछि नेपालमा अपनाइएको आर्थिक नीति नवउदारवादले कल्याण गरेन । सीमित व्यक्तिहरू धनी बने । यस्तो परिस्थितिमा शासन गरिरहेका साम्यवादी भन्नेहरू उदार प्रजातन्त्र अन्तर्गत नै छन्, जसलाई हेगेलवादी चिन्तक स्लोभाज जिजेकले ‘फुकुयामावादी वामपन्थी’ भनेका छन् । यिनीहरू लोकप्रियतावादी, प्रेसप्रति अनुदार र एकाधिकारवादी मनोविज्ञानले ग्रस्त छन् ।
आज अमेरिका र मेक्सिको सिमानामा पर्खाल बनाउनेहरू सक्रिय हुनथालेका छन् । नयाँ शीतयुद्धको संकट देखिएको छ । यो नयाँ शीतयुद्ध चीन र अमेरिकाबीच चल्ने देखिन्छ । वर्तमान रूस पनि पश्चिमसँग द्वन्द्वरत छ । उत्तर कोरियाको आणविक कार्यक्रम र इरानको आणविक वम निर्माण गर्ने महत्त्वाकांक्षा नयाँ शीतयुद्धका प्रेरकहरू हुन् । साम्यवाद एउटा राजनीतिमात्र नभएर पुँजीवाद विरुद्धको नयाँ जीवन पद्धति निर्माण दाबी गरिएको दर्शन थियो । त्यो त अब रहेन, तर नयाँ आवरण र स्वार्थहरूले गर्दा विश्व फेरि नयाँ ध्रुवीकरणतर्फ जाँदैछ । शीतयुद्धको अन्त्यपछि अमेरिकी चिन्तक चार्ल्स क्राथिमिरले अमेरिकाको विजयलाई एकध्रुवीय क्षण भनेका थिए । तर ३० वर्षपछि विश्व बहुध्रुवीय मात्रै होइन, झन् धेरै समस्याहरूले घेरिँदै गएको छ । तर वर्तमानमा विश्व मालिक बनेको पुँजीवादी पश्चिमको विरुद्ध त्यस्तो वैकल्पिक विचारधाराले चुनौती दिएको छैन । तर राष्ट्र–राष्ट्र बीचको महाखेल र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाले बर्लिनको पर्खाल फेरि कतै बन्ने त होइन भन्ने आशंका जन्माएको छ ।
बर्लिनको पर्खाल ढलेपछि युरोपको शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन आयो । पूर्वी युरोपका राष्ट्रहरू युरोपियन युनियन र नाटो सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध हुनपुगे । झन् पूर्वतिर फर्किए । यो समकिरणले रूस झस्कियो । पश्चिमाहरू आफ्नो विजयले विश्वव्यापी रूपमा प्रजातन्त्र र खुलाबजार अर्थतन्त्रको वकालत गर्न थाले । उदार विश्वको विजय मानिएको यो घटनाको तीन दशकपछि आज उदार विश्व नै संकटमा परेको छ । सूचना प्रविधि क्रान्ति यसपछिको मुख्य घटना हो । अहिले सबै राष्ट्र प्रभावित रहेको यो क्रान्तिपश्चात संसार डिजिटल प्रजातन्त्र र डिजिटल एकाधिकारवादमा विभाजन हुनपुगेको छ । बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी व्लेयर अबको द्वन्द्व खुला समाज र बन्द समाज चाहनेहरूबीच हुने बताउँछन् । बर्लिनको पर्खाल पनि यही द्वन्द्वमा आधारित थियो । यसर्थ समय बदलियो, चरित्र उस्तै छ । प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७६ ०९:४४
फरिद जकारियाको सूचना–राजनीति
कार्तिक २३, २०७६ रमेश के.सी.
सीएनएनका फरिद जकारिया सूचनाको राजनीति गर्छन् । प्राज्ञिक क्षेत्रबाट सञ्चार माध्यममा आएका जकारिया भारतीय मूलका पत्रकार, लेखक र चिन्तक हुन् । भारतको व्यावसायिक सहर मुम्बईमा जन्मेर हुर्किएका उनी इस्लाम धर्म र राजनीतिका प्राध्यापक राफिक जकारियाका सुपुत्र हुन् ।
भारतबाट अमेरिकी सपना हासिल गर्न अमेरिका पुगेका करिब ५० वर्षका उनी वर्तमान उदार विश्वका ‘पोष्टर ब्वाई’ हुन् । हरेक आइतबार सीएनएनमा ‘फरिद जकारिया जीपीएस’ नामको एक घन्टाको कार्यक्रम लिएर आउने उनको शृङखलाले भर्खरै ११ वर्ष पार गरेको छ । यस कार्यक्रमको दर्शक बन्नु अघि मैले उनको ‘दि फ्युचर अफ फ्रिडम’ पढिसकेको थिएँ । विश्वमा प्रजातन्त्रको भविष्यलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरिएको यस पुस्तकमा प्रजातन्त्रको क्षय र रूस लगायतका देशमा एकाधिकारवादको वर्चस्वबारे लेखिएको छ । अमेरिकाभित्र दुईदलीय राजनीति र विसंगतिलाई केलाइएको छ । स्वतन्त्रताको भविष्यमाथि आज जुन खतरा देखिएको छ, त्यो उनले १५ वर्षअघि नै आँकलन गरिसकेका थिए ।
आफ्नो टेलिभिजन कार्यक्रमको ११ वर्षको उपलक्ष्यमा जकारियाले विशेष प्रस्तुति दिए । जहाँ सेनाका पूर्वप्रमुख र पूर्व विदेशमन्त्री कोलिन पावेललाई अतिथि बनाइएको थियो । एक घन्टाको उक्त कार्यक्रम विशेष गरेर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र दर्शनमा केन्द्रित भए पनि त्यसमा विभिन्न क्षेत्रका विचारक, आविष्कारक र वैज्ञानिकसमेत उपस्थित हुन्छन् । तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको विश्वमा विशेष गरेर अमेरिकी बुद्धिको भूगोलमा उनले भ्रमण गराउँछन् । साम्यवादको पतनपछि सर्वेसर्वा बनेको अमेरिकाको क्षय, द्विविधा र हतासालाई बुझ्न यसले मद्दत गर्छ । बौद्धिक कार्यक्रम भए पनि सूचना, पुस्तक परिचय, अन्तर्वार्ता र टिप्पणीहरूले भरिएको यस कार्यक्रम रोचक छ र शिक्षाप्रद पनि छ । व्यावसायिक टेलिभिजनमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमाथि ११ वर्षसम्म साताको एक घन्टा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ठूलो बौद्धिक कसरत चाहिन्छ ।
आज अस्ताउँदो सूर्य बन्दै गएको अमेरिकाको सैन्य, आर्थिक र राजनीतिक चिन्ताहरू यस कार्यक्रममा व्यक्त हुन्छन् । जहाँ पूर्व विदेशमन्त्रीहरू हेनरी किसिन्जर, मेडलिन अलब्राइट, हिलारी क्लिन्टन, कोन्डालिजा राइसजस्ता हस्तीहरू आइरहन्छन् भने वाल्टर रसेल मेड र फ्रान्सिस फुकुयामा जस्ता चिन्तक पनि उपस्थित हुन्छन् । सीआईएका प्रमुखहरू, सैनिक जनरलहरू, प्राध्यापकहरू, न्युयोर्कका पत्रकारहरू र वैज्ञानिकहरूमार्फत बदलिँदो बुद्धिका आयामबारे छलफल गर्छन् । अमेरिकामा एउटा घारणा छ– ‘सिटी अन द हिल’ अर्थात अमेरिकाले जे गर्छ, कल्याण गर्छ । तर विश्व व्यवस्था लिएको करिब सय वर्ष पुग्नलाग्दा अमेरिका अहिले थकित र चकित छ । थकित यसकारणले कि अफगानिस्तान, इराक र लिबियाको संकटले उसको अन्तर्राष्ट्रिय लागतमा प्रश्न उठेको छ । चकित यसकारणले कि एसियाको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र चीनको अद्भुत उदयले शीतयुद्धपछि उसले शत्रु भेटेको छ । यी यस्ता प्रश्नहरू हुन्, जहाँ जकारिया घोत्लिन्छन्, सूचना विश्वव्यापी बनाउँछन् र साम्राज्यको रक्षा गर्छन् । एक्काइसौं शताब्दीको अमेरिकामा केन्द्रित उनको यो कार्यक्रम उदार विश्वको व्यवस्था रक्षा गर्न सञ्चालन गरिएको हो । उनी अमेरिका अद्भुत छ, आर्थिक र वैज्ञानिक दृष्टिले भनेर बारम्बार दाबा गर्छन् । लोकप्रियतावाद विरुद्ध उदार प्रजातन्त्रको रक्षा गर्छन् र भन्छन् कि पुँजीवादसँग मानव समस्या समाधान गर्ने क्षमता छ ।
सन् १९४५ पछि विश्व रंगमञ्चमा उदाएको अमेरिका नेतृत्वको वर्तमान विश्व व्यवस्थाको कवच बन्नु मानव जकारियाको धर्म हो । आखिर शीतयुद्धकालीन राजनीतिका यी गहन अध्येता विश्व प्रसिद्ध हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट अमेरिकी विदेश नीतिमा विद्यावारिधी न हुन् । यस अघि ‘न्युजविक’का अन्तर्राष्ट्रिय सम्पादक बनेका उनी हाल वासिङटन पोष्टका स्तम्भकार छन् । आधा दर्जनभन्दा बढी किताब लेखेका उनको पछिल्लो पुस्तक ‘पोष्ट अमेरिकन वर्ल्ड’ हो । उनले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको दाउपेच र एकाधिकारवादलाई भण्डाफोर गर्दै एक घन्टाको वृत्तचित्र बनाएका छन् । उनका कार्यक्रमका सार हुन्— उत्तर कोरिया, इरान, भेनेजुएलाको नीति ठिक छैन । चीन दीर्घकालीन खतरा हो । ट्रम्प राष्ट्रपति हुन योग्य छैनन् । संसारमा छाएको लोकप्रियतावाद उदार प्रजातन्त्रका लागि खतरा छ, अमेरिका सम्हालिनुपर्छ । यो अझै विश्वको हैकम गर्न योग्य छ । आदि–आदि ।
विश्वका प्रमुख जर्नलहरू, विविध विषयका प्रतिवेदनहरू र स्रोत व्यक्तिलाई उद्धरण गर्नु उनको विशेषतै हो । तैपनि प्रश्न भने उठ्छ— के जकारियाको सूचना राजनीति सही छ ? उता अलजजिरामा मारवान विसारा ‘इम्पायर’ अर्थात साम्राज्य कार्यक्रममा चिच्याउँछन् । साम्राज्य ठिक हैन, अमेरिका विश्वका लागि खतरा हो, साम्राज्यले शोषण र पुँजीवादमार्फत विश्वलाई मरणासन्न बनाएको छ जस्ता विचारहरू व्यक्त गर्छन् । वर्तमान विश्वमा पश्चिमी सञ्चार माध्यमको बोलवाला रहेको बेला अलजजिरामा विसारा वैकल्पिक स्वर दिएर देखापर्छन् । पेरिसस्थित अमेरिकी विश्वविद्यालयका पूर्वप्राध्यापक विसारा टेलिभिजनका वामपन्थी स्टार हुन् भने फरिद जकारिया पुँजीवादी विश्वको प्रवक्ता हुन् । विचार र सूचनाको सुनामी चलेको वर्तमानमा यी प्रस्तोताहरू आज आफ्नै सत्यको व्यापार गर्छन् ।
फरिद जकारिया विश्वशक्ति सन्तुलन संक्रमणकालमा गुज्रिरहेको बेला पश्चिमका सेवक हुन् । उनी आफ्नो कर्मभूमि अमेरिकाका सही रक्षक पनि हुन् । तर विश्व जकारियाले भनेजस्तो मात्रै छैन । गैरपश्चिमी समाजका समस्याहरू र विमर्श विरलै प्रस्तुत हुन्छ, उनको कार्यक्रममा । आफ्नो जन्मभूमि भारतलाई पनि उनी अमेरिकी आँखाले हेर्छन् । उनी बुद्धिको व्यापार गर्ने सम्भ्रान्त पत्रकार हुन् । जकारियाले जति साम्राज्यको सेवा गरे पनि र वैकल्पिक विश्वबारे ध्यान नदिए पनि दक्षिण एसियाली पत्रकारका लागि उनी सफल उदाहरण हुन् । अमेरिकामा सफलता पाएका अनेकौं आप्रवासी मध्येका एक चम्किला तारा हुन् ।
विशेषज्ञ भएर होला, अमेरिकी विदेश नीतिमा उनको आफ्नै दाबी छ । कस्तो विदेश नीति अपनाउने ? यथार्थवादी, आदर्शवादी वा हस्तक्षेपकारी । उता वामपन्थी चिन्तक तथा प्राध्यापक नोम चम्स्की भन्छन् कि ‘म सीएनएन हेर्दै हेर्दिन । यो विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ता हो ।’ अमेरिकी संस्थापन पक्ष र पुँजीवादी दृष्टिकोणलाई सूचनाको राजनीतिमार्फत प्रचार गर्ने कार्यक्रमका सञ्चालक हुन् जकारिया, जसलाई भारतीय कूटनीतिज्ञ शशी थरुरले अमेरिकाका विदेशमन्त्री बन्न योग्य छन् भनी टिप्पणी गरेका थिए ।
प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७६ ०८:२८